Madaxtooyada Somaliland Oo Lagu qabtay Xuska 57 Guuradii Ka Soo Wareegtay Markii Ay Somaliland Xornimada Ka Qaadatay Maxmiyadii Ingiriiska 26/Juun/1960 | Hubaal Media	Home
HUBAALMEDIA.COM Madaxtooyada Somaliland Oo Lagu qabtay Xuska 57 Guuradii Ka Soo Wareegtay Markii Ay Somaliland Xornimada Ka Qaadatay Maxmiyadii Ingiriiska 26/Juun/1960
“Maanta waa maalin weyn, waa maaalin aad innoogu qiimo badan, oo mudan innaynu muunayno, oo xusno, waa maalintii aynu xoriyada ka qaadanay maxmiyadii Ingiriiska 26/Juun/1960-kii.” Madaxweyne ku xigeenka JSL.
Hargaysa (Hubaal) Munaasibad lagu Weynaynayo 57 Guuradii ka soo Wareegtay Markii ay Jamhuuriyadda Somaliland Xoriyadeeda ka qaadatay Maxmiyadii Ingiriiska 26-kii June 1960 kii ayaa xalay ka qabsoontay Xarunta Qasriga Madaxtooyada Jamhuuriyadda Somaliland ee Hargeysa.
Munaasibadaasi oo ahayd mid si weyn loo soo agaasimay ayaa waxa ka qayb galay Madaxweyne ku xigeenka, ahna ku Simaha Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Md. Cabdiraxmaan Cabdilaahi Saylici, Gudoomiyaha Ahna Murashax Madaxweyne-nimo ee Xisbul xaakimka KULMIYE Muj. Muuse Biixi Cabdi, masuuliyiin iyo marti-sharaf door ah oo ay ka mid ahaayeen Gudoomiyaha Maxkamada Sare Md. Aadan Xaaji Cali, Gudoomiye ku xigeenka Golaha Wakiilada Baashe Maxamed Faarax, Gudoomiyaha UCID Eng, Faysal Cali Waraabe, wasiiro badan oo ka tirsan xukuumadda, Taliyeyaasha ciidamada kala duwan ee Somaliland iyo masuuliyiin ka socda hay’adaha Samafalka Caalamiga ah ee dalka jooga, Dublamaasiyiin ka socday Wadamada ay Somaliland Saaxiibka yihiin oo uu ka mid ahaa safiirka Djibouti.
Kooxda fanaaniinta qaranka ayaa halkaasi iyaguna ku soo bandhigay Suugaan ka turjumaysa qiimaha ay leedahay Maalintani 26-juun.